Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay qarax la rabey inuu ka dhaco Addis Ababa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay qarax la rabey inuu ka...
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay qarax la rabey inuu ka dhaco Addis Ababa
Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay qarax la doonayay in lala beegsado safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa.
Kooxda falka wadday ee la qabtay waa 15 qof ayaa la yidhi.
Wakaaladda Sirdoonka Itoobiya ayaa xaqiijisay in dadka la qabtay ay ahaayeen kuwo diyaarsan oo dalka dibaddiisa laga soo abaabulay.
Waxa la sheegay in gacanta lagu dhigay hub culus, bambooyin iyo dukumentiyo kale oo ay haysteen kooxda qaraxa wadday.
“Waxa aan ka war helnay in kooxda argagixisada ah ee Hibu’u ay qaraxa ku maleegayeen meel u dhow gidaarka safaaradda,” ayaa lagu yidhi warbixinta.
Dawladdu waxa ay xaqiijisay in la qabtay hoggaamiyaha kooxda falkan samayanaysay oo la yidhaa Cali Axmed Ardhayto oo 35 jir ah.
“Waxa uu qirtay in dibadda looga soo diray lacag dhan tobonnaan kun oo Doolar, si uu hawsha ugu fuliyo,” ayaa la yidhi.
Nin kale oo la yidhaahdo Maxamed Cabdiqani oo ay xidhiidh leeyihiin ayaa isagana maalin dhawayd lagu qabtay Addis Ababa. Waxaana gurigiisa laga helay walxaha qarxa.
Warxbixinta waxa lagu sheegay in sidoo kale la fashilayay falal argagixiso oo ay kooxdani ku doonaysay in ay ku qarxiyaan safaaradda Isku tagga Imaaraadka Carabta ee ku taalla Khartuum kaddib markii ay Itoobiya wargelisay sirdoonka dalka Soodaan.
“Nin magaciisa lagu sheegay Axmed Ismaaciil oo deggan Iswiidhan ayaa leh qorshaha iyo maamulka kooxdan,” ayaa ay tidhi dawladdu. Ninkaasi waxa uu kooxda ka caawinayay sida loo soo ururin karo xogta safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa.
Dawladdu waxa ay tilmaantay in ay kaashatay wakaaladaha sirdoonka ee Afrika, Yurub iyo Eeshiya si ninkaasi loo soo qabto, waxaana meelo kale oo caalamka ah lagu qabtay ilaa 21 qof oo ay xidhiidh leeyihiin.
Waxa hadda hawsha la wareegay waaxda baadhitaanka ee ciidanka federaalka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
Falkani waa mid lagu xumaynayo magaca xudunta Afrika ee Addis Ababa ayaa ay tidhi dawalddu waxaanay shacabka ugu baaqday in ay farta ku fiiqaan wax kasta oo amnigooda halis ku ah.
Next articleMadaxweyne ku xigeenka Somaliland oo Daahfuray Shirka Qaran ee ka Faa’iideysaiga Biyaha Roobka
Rag hubeysan ayaa weerarey dhisme ku yaal magaalada Karachi ee dalka...